ALBANIA VS ITALIA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
ALBANIA VS ITALIA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
(Tirana) 09 Okt 2017 – Waxaa caawa kulanka ugu dambeeyay wareeggooda yeelan doona xulalka Albania vs Italy oo ku wada ciyaaraya dalkaasi Albania iyadoo Talyaaniga oo xaqiijiyay kaalinta 2-aad ay doonayaan inay badiyaan si ay heerkooda FIFA sare ugu qaadaan.
Dhanka Albania: Ma jiro wax uu caawa u ciyaarayo macallinka Albania ee Cristian Panucci, marka laga soo tago qab kooxeed iyo qancin taageere maaddaama ay ka quusteen KA2018.
Dhanka Italy: Ventura oo ay beryahan ku socoto seefta saxaafaddu kaddib dhowr bandhig oo aan qurxoonayn ayaa kusii adkaysanaya shaxda 4-2-4. Parolo ama Cristante midkood ayaa wehlinaya, iyadoo uu soo laabanayo Candreva oo uu wehliyo saaxiibkii Eder oo kulankii hore ka fadhiyay.
12 HOXHA, 23 KOLICI, 22 NDOJ, 14 BALLIU, 5 VESELI, 6 DJIMSITI, 3 LENJANI, 11 AHMEDI, 20 KACE, 19 LATIFI, 16 MEMOLLA
12 DONNARUMMA, 22 PERIN, 13 ASTORI, 5 RUGANI, 21 D’AMBROSIO, 16 CRISTANTE, 14 BARELLA, 20 BERNARDESCHI, 2 ZAPPACOSTA, 9 VERDI, 23 GABBIADINI
El Shaarawy, Barzagli
''Maxaa Barcelona lagala soo doonayaa Premier League?!'' - Arsene Wenger oo mucaaraday in Barca lagu daro EPL
Qayb ka mid ah liiska hordhaca ah ee ciyaartoyda u tartamaya Ballon d'Or oo la shaaciyay